peineili spray – MM Online Shopping
တခါဖနျြးရငျ ပုံမှနျ​ထကျ​ ၄ဆ ကွာစပေါတယျ. .သုတျလှတျနူနျးကို ကွနျ့ကွာစပေါတယျ ..
ပါဝငျပစ်စညျးမြား Sophora flavescens, Syzygium aromaticum, Spongilla fragilis Lecidy, Barkof Japanese Cinnamon
spray အသုံးပွုနညျး လိငျတနျကို အရငျမာအောငျလုပျပါ ပွီးရရငျ လိငျတနျအပျေါ အရပွေားကို အောကျဆှဲခပြါ လိငျတနျထိပျဖြားကို မဖနျြးရ ထိပျဖြားအောကျရှိ အတှငျးသားတှငျ ပျေါနသေော အကွောလေးတှကေို့ ဖနျြးပါ ၃ခကျြမှ ၅ခကျြအထိ ဖနျြးလို့ရပါသညျ ဖနျြးဆေးကို ခွောကျအောငျ ၅မိနဈလောကျထားပါ
အတူနခေါနီး5မိနဈ အလိုတှငျ spray ကိုကွိုဖနျြးပါ
size 15 ML .
တခါဖျန်းရင် ပုံမှန်​ထက်​ ၄ဆ ကြာစေပါတယ်. .သုတ်လွှတ်နူန်းကို ကြန့်ကြာစေပါတယ် ..
ပါဝင်ပစ္စည်းများ Sophora flavescens, Syzygium aromaticum, Spongilla fragilis Lecidy, Barkof Japanese Cinnamon
spray အသုံးပြုနည်း လိင်တန်ကို အရင်မာအောင်လုပ်ပါ ပြီးရရင် လိင်တန်အပေါ် အရေပြားကို အောက်ဆွဲချပါ လိင်တန်ထိပ်ဖျားကို မဖျန်းရ ထိပ်ဖျားအောက်ရှိ အတွင်းသားတွင် ပေါ်နေသော အကြောလေးတွေ့ကို ဖျန်းပါ ၃ချက်မှ ၅ချက်အထိ ဖျန်းလို့ရပါသည် ဖျန်းဆေးကို ခြောက်အောင် ၅မိနစ်လောက်ထားပါ
အတူနေခါနီး5မိနစ် အလိုတွင် spray ကိုကြိုဖျန်းပါ
Be the first to review “peineili spray” Cancel reply
Procomil Delay cream (ကြာလိမ်းဆေး )
ပိတုန်းကြာဆေး (Ding Dong cream 77)
Sex Perfume Lure , (for him & her ) NT WT 50 Ml
XXL New ကြီးရှည်လိမ်းဆေး